“စစ်ဗျူဟာပညာရှင်များကို အံ့ဩသွားစေသော စစ်ကိုင်း” – စွယ်စုံသုတ
“စစ်ဗျူဟာပညာရှင်များကို အံ့ဩသွားစေသော စစ်ကိုင်း”
မြန်မာပြည်မှာ PDF စပေါ်ပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးစချိန်မှာ ပညာရှင်ဆိုသူများက လက်ရှိတပ်ဟာ နှစ် ၇၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိလို့ မနိုင်နိုင်ဘူးပြောကြတပါတယ်။ နောက်ပညာရှင်ဆိုသူများကလဲ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းက လက်နက်ထောက်ပံ့တာကို အားပေးမှာမဟုတ်လို့ မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုပါတယ်။ စင်ကာပူ ဝန်ကြီးဟောင်းက အမေရိကန်စစ်တပ်က မလာနိုင်ကြောင်း ဒါကြောင့်စစ်ရေးအရ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အင်တာဗျူးမှာ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ အချို့ပညာရှင်များက လစ်ဗျားလို အနောက်ကဝင်လဲ မအောင်မြင်နိုင်သလို ဆီးရီးယားလို ထောက်ပံ့လဲ မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါက ဖေဖော်ဝါရီလမှာပါ။
သူတို့ပြောတာတွေက အမှန်လား? မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။ အမေရိကန်တပ် ဝင်မလာခဲ့ပါ။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလိပ်တို့က လက်နက်မထောက်ခဲ့ပါ။ ဒါဆိုရင် မအောင်မြင်တော့ဘူးလား? မြန်မာဟာ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားမဟုတ်ပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ လွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးတွေပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံး လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားနဲ့မတူတာက တရားဝင်အစိုးရရှိပြီးသားပါ။ နောက် အာဆတ်တပ်ဟာ သူ့လူမျိုးအပေါ်မူတည်ပြီး ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပေမယ့် မအလတပ်က အချောင်သမား၊ မုဒိမ်းကောင်များနဲ့သာ ဖွဲ့ထားတာပါ။ အခြေခံစိတ်ဓာတ်မအလတပ်မှာ မရှိတော့ပါ။ စီစီဝမ်တာပန်တိုက်ခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်က ရာဇဝင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။
မအလတပ်ဟာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရက်စက်စွာ နှိမ်နင်းပြီးနောက်မှာ ပြည်သူအများစုက လက်နက်ကိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံပါ။ ဒီနေရာမှာ နဂိုကလဲ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ လက်နက်ကိုင်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေက လူမျိုးရေးအခြေခံဖွဲ့ထားလို့ သူတို့အင်အားက လူမျိုးကို အခြေခံရပါတယ်။ ယခင်ပွဲတွေက ဗမာမပါခဲ့ပါ။ ဒီပွဲမှာ ဗမာ့သူရဲကောင်းတွေ မွေးထုတ်လေ့ရှိတဲ့ စစ်ကိုင်းနဲ့ မကွေးမြောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးအချို့ဒေသတွေက ပါဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ တူမီးလောက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငွေကြေးမလုံလောက်လို့ PDF တိုင်း လက်နက်မရှိပါ။
ဒီနေရာမှာ မြန်မာလူမျိုးများက လက်နက်တွေကို စတင်ပြီး မိမိဖာသာ ထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ မိုင်းတွေကိုလဲ စတင်တီထွင်ပြီး ခွဲလာခဲ့တာ တစ်ပွဲထက်တစ်ပွဲ အားပိုကောင်းလာပါတယ်။ မအလတပ်က ရွာတွေမီးရှို့ လူတွေသတ် တုန့်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် လင်သေရင် မယားက PDF၊ အဖေသေရင် သားက PDF ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ယခုဆိုရင် PDF က ပြည်ပအားမကိုးဘဲ လက်နက်ကြီး အသေးစားတွေတောင် စထွင်လာတာကို စစ်ကိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာ တွေ့လာနေရပါပြီ။ ယခင်က မိုင်းကြောက်နေရတဲ့ မအလတပ်ဟာ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လက်နက်ကြီးထိပြီး ဆေးရုံရောက်တာတွေ စရှိလာနေပါပြီ။ ဒါက ပြည်ပနိုင်ငံများက မကူညီတဲ့ကြားက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာ့တော်လှန်ရေးပါ။
ဒီနေ့ဆိုရင် စစ်ကိုင်းမှာ PDF က ကုန်ကားတွေ အခွန်ဆောင်တာ စစ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိ အုပ်ချုပ်မှုက မြင့်မားလာနေပါပြီ။ မအလကရက်စက်စွာ တုန့်ပြန်နေပေမယ့် သူမသိတာက စစ်ကိုင်းအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ့သူရဲကောင်းတွေ ထွက်လေ့ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သစ်ပေါ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာပါ။ နောက်တော်လှန်ရေးမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များစွာ ကွဲနေတာဟာ ရေရှည်မှာ ပြဿနာရှိနိုင်ပေမယ့် ရေတိုမှာ စရဖက လိုက်မရဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ စရဖက NUG ပို့တဲ့ လက်နက်အချို့ကို မိခဲ့ရင်တောင် အောက်ကအဖွဲ့တိုင်းက NUG အောက် မရှိသေးလို့ အကုန်မမိနိုင်ခဲ့ပါ။ နောက် NUG အောက်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အချို့ရှိလို့ ပြည်သူက မုန့်ဟင်းခါးကျွေးချင်လဲ NUG နဲ့ မပတ်သက်ဘဲ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို မျက်နှာပူစရာမလိုဘဲ ကျွေးလို့ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါကအဖွဲ့ကွဲနေချင်းရဲ့ ရေတိုအားသာချက်ပါ။
တော်လှန်ရေးဟာ လွယ်သလားဆိုတော့ မလွယ်ပါ။ ပေးဆပ်ရတာတွေများပါတယ်။ ပေးဆပ်မှုတွေလဲ ရှိနေဆဲပါ။ ကားနဲ့အတိုက်ခံရတာ မီးနဲ့အရှို့ခံရတာတွေက စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ဒါပေမယ့် မအလတပ်ထဲမှာလဲ အထူးသဖြင့် စစ်ကိုင်းမှာသေတာက အများကြီးပါ။ တပ်တွေပိတ်မိတာ၊ ကျွံသွားတာတွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါတွေကို ဒီလိုမျိုးအထိ ပြည်သူ့တပ်မတော် PDF က တိုက်နိုင်လိမ့်မယ့်လို့ ဘယ်ထင်ထားပါ့မလဲ။ တပ်ထဲက ရခိုင်စစ်မြေပြင်က ပြန်လာသူအချို့တောင် ရခိုင်ကထက် ရဟတ်ယဉ်အကြိမ်များစွာခေါ်ပြီး ပစ်ကူတောင်းနေရတာ ဝန်ခံကြပါတယ်။ ဗျူဟာမှူးလဲလိုက် တိုက်လိုက် လုပ်နေပေမယ့် သေဆုံးနှုန်းက မအလတပ်မှာ မကျသွားခဲ့ပါ။ ယခုဆိုရင် ပညာရှင်ဆိုသူများက PDF က အားကြီးလာပြီး မအလထွက်ပေးပြီး ဆွေးနွေးမှရမယ်လို့ လေသံပြောင်းလာကြပါပြီ။
ယခုအချိန်မှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးများကလဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လှူနေကြလို့ NUG ကလဲ လက်နက်တွေပို ဝယ်လာနိုင်မှာပါ။ နယ်မြေထိန်းနိုင်ဖို့က NUG မှာ လက်နက်ကြီးတွေ၊ လေယဉ်ပစ်လက်နက်တွေလိုပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒီနေ့ပေးရင် မကွေးကနေ ကချင်အထိ ချက်ခြင်းလွတ်လပ်ရေးရသွားမှာပါ။ မပေးရင် ပြည်ပက မြန်မာတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုအပေါ် မှီခိုနေရလို့ အချိန်ကြာပေမယ့် ပိုက်ဆံစုပြီး လက်နက်ကြီးဝယ်တဲ့ပုံစံမိုလို့ အချိန်ကြာလာလေ ငွေများလာလေဖြစ်မှာပါ။ အချိန်ယူရနိုင်ပေမယ့် ယခုဆိုရင် စစ်ကိုင်းမှာ အချုပ်အခြာ အာဏာကို NUG က စပြလို့ရနေပါပြီ။ စစ်ကိုင်းမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ၊ အာဆီယံကုမ္ပဏီတွေဟာ NUG ကို အသိအမှတ်ပြု အခွန်ဆောင်ရတော့မှာပါ။ အခွန်မဆောင်ရင် တရုတ်ပြည်မှာ၊ အာဆီယံမှာ အခွန်မဆောင်တဲ့သူတွေဟာ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူခံရမှာပါ။ သူတို့ကို အရေးယူနိုင်မှာပါ။ အရေးတော်ပုံက အောင်နေပါပြီ။
ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားသည့္ ပိုက္ဆံအတုေလးမ်ားျဖင့္ ၇ႏွစ္တိုင္တိုင္ေန႔စဥ္ေခါက္ဆြဲလဝယ္တတ္သည့္ အိမ္ေျခမဲ့အဖိုးကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေစတနာမပ်က္ေရာင္းေပးေနခဲ့သည့္ဆိုင္ရွင္